Browse › Home › ဆောင်းပါး » လိမ်ညာမှုကို လက်ခံတဲ့ ပူးပေါင်းကော်မတီလား၊ လိမ်ညာမှုကို မှတ်တမ်းတင်တဲ့ လွှတ်တော်လား
ရန်ကုန်တိုင်းမ် ဂျာနယ်၊ မွန်းတည့်နေဂျာနယ်၊ ၇-၂-၁၄။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပညာရေး မြှင့်တင်မှု ကော်မတီနှင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ဝန်ကြီးတို့က သီးခြားစီ ရေးဆွဲထားသော ပညာရေးမူဝါဒများ တပေါင်းတစည်းတည်း ဖြစ်ရန် ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ ရက်နေ့တွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း ခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက The Voice သို့ ပြောကြားသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ ရက်နေ့ ညနေ ၅ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန (၅) ဝန်ကြီး ဦးတင်နိုင်သိန်း၏ ရုံးခန်းတွင် ဦးတင်နိုင်သိန်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ပညာရေး မြှင့်တင်မှု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာချမ်းငြိမ်းတို့ သုံးဦး တွေ့ဆုံခဲ့ကြကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
အစိုးရသစ် လက်ထက် ပညာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွင် အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများ အပါအဝင် ပညာရေး သုတေသန ပညာရှင်များနှင့် ဝန်ကြီးဌာန တာဝန်ရှိသူများ ပူးပေါင်းရေး အတွက် တွေ့ဆုံကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဖြည့်စွက် ပြောကြားသည်။
“အတည်ပြုမှာက ဥပဒေ တစ်ခုတည်း။ ဆွဲနေတဲ့အဖွဲ့က သုံးဖွဲ့။ နောက်ဆုံးတော့ အချိန်လည်းကုန်တယ်။ လူလည်း ပင်ပန်းတယ်။ ငွေလည်းကုန်တယ်” ဟု လက်တွေ့ကျသော ပညာရေး မြှင့်တင်မှု အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီဝင် လုပ်သက် ဆယ်နှစ်ကျော်ရှိ ပညာရေး ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက The Voice သို့ ပြောဆိုသည်။
လက်ရှိတွင် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ပညာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ကွန်ရက် (NNER)၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပညာရေး မြှင့်တင်မှု ကော်မတီနှင့် နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး ဦးဆောင်သော လက်တွေ့ကျသည့် ပညာရေး မြှင့်တင်မှု အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီတို့က အမျိုးသား ပညာရေးဥပဒေ (မူကြမ်း) အတွက် ပညာရေး မူဝါဒများ သီးသန့်ရေးဆွဲလျက် ရှိကြောင်း အဆိုပါ အသိုင်းအဝိုင်းထံမှ သိရသည်။
NLD ဦးဆောင်သည့် NNER က အရပ်ဘက် ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ရေးဆွဲခြင်း ဖြစ်ပြီး တက္ကသိုလ်များ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကို ဦးစားပေး ရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်ကာ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပညာမြှင့်တင်မှု ကော်မတီနှင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ဦးဆောင်သည့် ကော်မတီတို့ကမူ ယင်းကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ ညှိနှိုင်းနေရသော အနေအထား ရှိနေသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့မှာ ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းမှာ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ဦးအေးသာအောင်နဲ့ ဒေါက်တာအေးမောင် တို့အဖွဲ့ စီးလာတဲ့ကားကို သေနတ်နဲ့ လိုက်လံပစ်ခတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
မလေးရှားနိုင်ငံမှာ အကြမ်းဖက်ခံခဲ့ရမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရွှေတိဂုံဘုရားအရှေ့ဘက်မုခ်ရှိ ရခိုင် ဓမ္မာရုံမှာ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေက ဒီနေ့မနက်ပိုင်း သတင်စားရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
မလေးရှားစံတော်ချိန် ည ၁၁ နာရီခွဲ လောက်မှာ ဆိုင်ကယ်နဲ့ လူ ၂ ဦးက သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကားပေါ်ပါလာသူတွေ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိပေမယ့် ကားမှာတော့ ကျဉ်ဆန် ၃ ချက်ထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဘာမဟုတ်တဲ့ ကိစ္စလေးကိုလည်း သည်းမခံနိုင်ဘူး။
မြတ်ဗုဒ္ဓပြောတဲ့ ဒေါသဖြစ်လွယ်တဲ့အချိန်ထဲမှာ အိပ်ရာထ ခါစလည်းပါတယ်၊
အိပ်ရာထခါစ အချိန်ဆိုတာ တနည်းအားဖြင့် အိပ်ရေးမဝတဲ့ အချိန် (သို့) မဝတဝ ဖြစ်နေတဲ့အချိန်လည်းပါတယ်။
မဝတဝချိန် - အိပ်ရေးပျက်ချိန်ဆိုတော့ ပိုဆိုးနိုင်တယ်။
ဒါကြောင့်လည်း ထစ်ခနဲ့ဆို ဒေါသ ထွက်တတ်တယ်။
Positive Thinking ထက် Negative Thinking တွေပိုဝင်တတ်တယ်။
ဒီလို အိပ်ရေးပျက်တာများတော့ Negative Thinking က ပိုပိုများလာတတ်ပြီး
ကိုယ့်အပေါ်ကိုယ် မကျေနပ်တဲ့ စိတ်တွေ၊
အတိုင်းအဝိုင်းပေါ် မကျေနပ်တဲ့ စိတ်တွေ၊
လောကကြီးအပေါ် မကျေနပ်တဲ့ စိတ်တွေ၊
တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ မသိမတာနဲ့
နောက်ဆုံး စိတ်ဓာတ်ကျ ရောဂါလို ဖြစ်လာတယ်။
ဒါကြောင့် စိတ်ဓာတ်မကျလွယ်ဖို့ ဒေါသမဖြစ်လွယ်ဖို့ ဆိုတာလည်း
ပထမ ဦးဆုံးအနေနဲ့က ကျန်းမာရေးကောင်းအောင်နေရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလည်း
အဲ့ဒီ ကျန်းမာရေးဆိုတာ အိပ်ရေးဝဖို့လည်းပါတယ်။
Negative Thinking ပိုများမယ်
စီးပွါးရေး လူမူရေးကို ထိခိုက်နှစ်နာစေမယ်။
ရှာသမျှလည်း ဆေးဖိုးနဲ့ ပြန်ကုန်နိုင်တယ်။
ဒါကြောင့် ချမ်းသာရာ မရောက်ပဲ ဆင်းရဲရာရောက်နိုင်တယ်။
အမှန်တကယ် ချမ်းသာ ကျန်းမာသူဖြစ်ဖို့လည်းလိုတယ်၊
ဖြစ်ဖို့လည်း မြတ်ဗုဒ္ဓက ပေးတဲ့နည်းလမ်းလေးကို
ဘက်စုံရှူ့ထောင့်ကနေ မြင်တတ် ကြည့်တတ်အောင်ကြိုးစားပြီး
အလယ်အလတ် လမ်းစဉ်ကို ရွေးချယ်နိုင်ဖို့လည်း ကြိုးစားရမယ်။
ဒါကြောင့် အိပ်ရေးပျက်တာများသူကို သည်းခံပေးဖို့
အကြံဉာဏ်ပေးဖို့ သတိပေးဖို့၊ ဒီစာကို မေတ္တာနဲ့ D-eXistence မှ ရေးသားပြုစု တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
တဆက်ထဲမှာ ဓမ္မစာပေလာအရ ဒေါသဖြစ်လွယ်တဲ့ အချိန်နဲ့ ချမ်းသာစေသော အကြောင်းတရားကိုလည်း တင်ပြအပ်ပါသည်။
"ဒေါသဖြစ်လွယ်သည့်အခါ ၆ ပါး"
၁။ ခရီးသွားရာမှ ပြန်လာသော အခိုက်
၂။ ထမင်းစားခါစ အခိုက်
၃။ အိပ်ယာထစ အခိုက်
၄။ ဆာလောင် မွတ်သိပ်နေသော အခိုက်
၅။ ဝေဒနာခံနေရသော အခိုက်
၆။ စိတ်တွင် အငြိုးဖြစ်နေသော အခိုက် (၀ါ) စိတ်တိုနေခိုက်
Credit To : အနှိုင်းမဲ့စာတိုပေစများ
6 Situations Which Can Make You Angry So Easily
1. When you just arrived from Journey or Outside.
2. When you are eating.
3. When you just woke up.
4. When you are very hungry.
5. When you are in pain or suffering.
6. When you are upset about something.
ချမ်းသာစေသော တရား (၆) ပါး
(၂) ကိုယ်ကျင့်သီလကိုလည်း အလိုရှိရမယ်။
(၅) သုစရိုက်သုံးပါးကိုလည်း အလိုရှိရမယ်။
(၆) မပျင်းမရိခြင်းကိုလည်း အလိုရှိရမယ်။
( မြတ်ဗုဒ္ဓ )
the eXistence မှ မှတ်သားထိုက်သည့် စကားအလင်္ကာ - စာအုပ်မှ ကူးယူဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ စာမျက်နှာ (၁၃)
6 Things To Follow To Be Rich
1. You should try to be Healthy.
2. You should try to keep good morals.
(eg. Trust, play main role in Business if you cannot be trust no one would want to do business with you.)
3. You should listen and follow the wise person advice.
4. You should try to keep yourself updated to the new world and try to learn new things by always opening your eyes and listening always.
5. You should do good things or do merit or help others.
6. You should not be lazy.
Translated by : D-eXistence ( မှ ဘာသာပြန်ပူဇော်သည်။ )
အောက်ပါ Link တွင်လည်း ဝင်ရောက်ဖတ်ရှူ့နိုင်ပါသည်။
လက်အိတ်တွေအတွက် Touchscreen ပေါ်မှာ အဆင်ပြေစေမဲ့ nonotips အရည်
လက်အိတ်အထူကြီးဝတ်ပြီး Touchscreen ကို အသုံးပြုရတာ အဆင်ပြေပါရဲ့လား ?
အထူးသဖြင့် အမြဲတမ်း လက်အိတ်နဲ့ ထိတွေ့ပြီး လုပ်ငန်းခွင် ၀င်နေတဲ့ သူတွေ၊ လက်အိတ်မရှိမဖြစ်လိုတဲ့ အအေးပိုင်းဒေသကသူတွေ၊ ဆိုင်ကယ်စီး
ရင် လက်အိတ်အသုံးပြုတဲ့ လူတွေအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောသူတွေဟာ ဖုန်းတွေ၊ Touchscreen ပါဝင်သုံးပြုရတဲ့ ပစ္စည်းတွေမှာ အခက်အခဲ ရှိတတ်ကြပါတယ်။
ထို့ကဲ့သို့ အခြေအနေမျိုးတွေကို ထို nanotips လို့ခေါ်တဲ့ အရည်လေးက လွယ်ကူ အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းစွာနဲ့ tuchscreen တွေမှာ လက်အိတ်ဝတ်ထားပေမဲ့လည်း တကယ်လက်နဲ့ ထိတွေ့နေရသလို ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုဆိုတော့ စတိုင်မပျက်ပဲ လက်အိတ် ချွတ်စရာလည်းမလိုတော့ဘူးပေါ့။
မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးရင်နဲ့လည်း ဖုန်းထဲက အီးမေးလ်တွေကို ကြည့်လို့ရပါတယ်။ တကယ်လို့ စိတ်ဝင်စားရင်တော့ အမည်းရောင် nanotips တစ်ဘူးအတွက် ဒေါ်လာ (၂၀)လောက် ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ သူက ရာဘာလက်အိတ်နဲ့ အခြားပါးလွှာတဲ့
လက်အိတ်တွေက်ု ၀တ်ဆင်တဲ့သူတွေအတွက် ဖြစ်ပြီး ပလတ်စတစ်အသားတွေအတွက် ရည်ရွယ်တဲ့ အပြာရောင် nanotips ကတော့ ဒေါ်လာ (၂၇) ဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်မျိုးစလုံးကို ဖော်ဝါရီလနဲ့ မတ်လကြားထဲမှာ ၀ယ်ယူရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ညစ်နေစဉ် facebook မှာ Status တင်ခြင်းဟာ စိတ်ပြေလျော့နိုင်ခြင်း ရှိ / မရှိ
တစ်ခါတစ်ရံမှာ လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ စိတ်ညစ်တတ်ကြ ပါတယ်။ ဒီအတွက် စိတ်ထွက်ပေါက်ကို လိုက်လံရှာဖွေ ကြပါတယ်။ သူငယ်ချင်း ၊ မိတ်ဆွေ၊ ညီအကိုမောင်နှမ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် စတဲ့ သူတွေကို ရင်ဖွင့်လေ့ ရှိကြပါတယ်။
စိတ်ညစ်တဲ့ အခါမှာ ရင်ဖွင့်လိုက်ရလို့ စိတ်ကိုပြောလျော့နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်ညစ်တဲ့ အခါမှာ ရင်ဖွင့်ဖို့ လူမရှိဘူးဆိုရင် ယနေ့ခေတ်မှာတော့ facebook မှာ Status တွေကို တင်ကြပါတယ်။ လူတိုင်းမဟုတ်သော်လည်း အတော်များများ Status တွေကို တင်ကြပါတယ်။
ဒီလိုမျိုး facebook ပေါ်သို့ Status တင်ခြင်းကြောင့် လူတစ်ယောက်ကို ဖွင့်ပြောပြ လိုက်ရသလိုမျိုး ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အပြန်အလှန် comment တွေကိုပေးခြင်း ကြောင့် ပြဿနာအတွက် နည်းလမ်းကောင်းတွေကို ရနိုင်တဲ့ အပြင် သီငယ်ချင်းတွေရဲ့ စနောက်မှုတွေကို ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုပါ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာတော့ မိမိတင်လိုက်တဲ့ Status အပေါ် ရိုင်းဆိုင်းစွာ ဝေဖန်ပြောဆိုသော သီငယ်ချင်း တစ်ချို့ကြောင့် ပိုမိုပြီး ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း အကြမ်းမျဉ်း အရတော့ စိတ်ညစ်နေစဉ် facebook မှာ Status တင်ခြင်းဟာ စိတ်ကို ပြေလျော့နိုင်ပါတယ်။
၆.၂.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၁၂၀၀အချိန် လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊(၂၀)ရပ်ကွက်နေ ဆယ်အိမ်မှူး ဦးထွန်းလှသည် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၌ ရှိနေစဉ် (၂၀)ရပ်ကွက်၊ ရွှေတလေးလမ်းနေ စိုးနိုင်(ဘ)ဦးလှကြိုင်နှင့် ၎င်း၏ဇနီးမစိုးခိုင်တို့သည် မိသားစုကိစ္စဖြင့် စကားများရန်ဖြစ်စဉ် စိုးနိုင်မှ အရိုးအသွား ၈လက်မခန့်ရှိ ဓါးဖြင့်ထိုးခဲ့၍ မစိုးခိုင်တွင် ၀မ်းဗိုက်၌ဒဏ်ရာ (၁)ချက်ရရှိခဲ့ပြီး စိုးနိုင်မှာ ထွက်ပြေးသွားကြောင်း ကြားသိရသဖြင့် သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့သွားရောက်ကြည့်ရှုရာ မစိုးခိုင်မှာ နေအိမ်ပေါ်၌ ၀မ်းဗိုက်တွင်
ထိုးသွင်းဒဏ်ရာ(၁)ချက်ဖြင့် လဲကျနေသည်ကိုတွေ့ရ၍ အင်းစိန်ဆေးရုံ သို့ပို့အပ်ခဲ့ရာ အတွင်းလူနာ(စိုးရိမ်ရ)အဖြစ်ကုသနေရသောကြောင့် စိုးနိုင်အား အရေးယူပေးပါရန် ဦးထွန်းလှမှ တရားလိုပြုလုပ်တိုင်တန်း ခဲသဖြင့် သောင်ကြီးနယ်မြေရဲစခန်း (ပ)၈၂/၂၀၁၄၊ ပုဒ်မ ၃၂၆ ဖြင့် အမှုဖွင့်ကာဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။
အင်းစိန်ဆေးရုံတွင် ဆေးကုသမှုခံယူလျက်ရှိသော မစိုးခိုင်မှာ ယင်းနေ့
၁၄၄၀ အချိန်တွင် ရရှိသောဒဏ်ရာဖြင့် သေဆုံးသွားသောကြောင့်
ပုဒ်မ ၃၂၆ မှ ၃၀၂ သို့ပြောင်းလဲစစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိ
အစိုးရသတ်မှတ်ထားတဲ့ တိုင်းရင်းသား ၁၃၅ မျိုးမှာ ချင်း မျိုးနွယ်စုဝင် တိုင်းရင်းသား ၅၃ မျိုး ပါဝင်တယ်။
အဲဒီထဲက တမျိုးဖြစ်တဲ့ ဇိုမျိုးနွယ်စု ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်ပါသလား။
အဖြေက - ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်ပါတယ် တဲ့။
ပျောက်သွားနိုင်စရာအကြောင်းတခုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဇိုမျိုးနွယ်စုဝင်တွေက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ရန်ကုန်မြို့မှာ သတင်းသမားတွေနဲ့ တွေ့ဆုံစဉ် ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
အစိုးရက မကြာခင် ပြည်လုံးကျွတ် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်မယ်၊ အဲဒီအခါမှာ ဇိုလူမျိုးနွယ်တွေက အချက်အလက်ကို မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြည့်စွက်ဖို့လိုတယ်၊ အကြောင်းကတော့ ဆင်တူယိုးမှားနာမည်တခု ရှိနေတာကြောင့်ပါပဲ တဲ့။
အဲဒီ ဆင်တူယိုးမှားနာမည်က ဇိုမီး(ZO MI) ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီအကြောင်းရှင်းပြသူများထဲက တဦးကတော့ ဇို(ZO) စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမန်းခင်ထန် ဖြစ်ပါတယ်။
ဇို မျိုးနွယ်စုကို အစိုးရက တရားဝင် အသိအမှတ် ပြုထားတယ်၊ နံပတ်က ZO Code 421 ဖြစ်တယ်လို့ သူက ရှင်းပြပါတယ်၊
အခုအချိန်မှာ တီးတိန်လူမျိုး (Tiddin Code 424) က ဇိုမီးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (Zomi Congress For Democracy) ဆိုတာကို ဖွဲ့စည်းထားတယ်၊ ဒေသတွင်း ဇိုမီး မျိုးနွယ်စု ပေါ်ထွက်လာရေးအတွက် စည်းရုံးတာတွေ ရှိနေတယ်လို့လည်း ဦးမန်းခင်ထန်က ဧရာဝတီသတင်းဌာနကို ရှင်းပြပါတယ်။
“ဇိုမီးဆိုတာ မရှိခဲ့ဘူး။ ချင်းလူမျိုး ဇိုလို့ပဲ ဟိုးအရင်ထဲက ရှိခဲ့တယ်။ မီး ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်က လူမျိုးကို ခေါ်တာ။ မြန်မာဆိုရင် လူတိုင်းသိကြတယ်။ မြန်မာလူမျိုး ဆိုပြီး ထပ်ထည့်စရာ မလိုတော့ဘူး။ အခုဟာက တိုင်းရင်းသားထဲက ခွဲထွက်လိုက်တဲ့ အဓိပ္ပါယ် ဖြစ်နေတယ်။ ရှိပြီးသား ဇိုလူမျိုးတွေကို ထိခိုက်နိုင်တယ်”
ဇိုမီး မျိုးနွယ်စုဆိုပြီး ပေါ်ထွက်လာရင် ဇို တွေ နစ်နာမှာဖြစ်လို့ ဒီ ကိစ္စရပ်များနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သမ္မတရုံး၊ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၊ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၊ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့ အင်အား ဝန်ကြီးဌာနတို့ကို ဆက်သွယ် တိုင်ကြားမယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
အစိုးရက မကြာခင် ပြည်လုံးကျွတ် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ဖို့ ပြင်ဆင်နေပြီ ဆိုတော့ ခုကတည်းက ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖြစ်အောင် သက်ဆိုင်ရာဒေသတွေမှာရော စာနယ်ဇင်းတွေကတဆင့်ပါ ရှင်းလင်းပြောကြားနေကြတာပါ။
ဒါဆိုရင် ဇိုမီး မျိုးနွယ်စုအမည်ပေါ်ပေါက်ရေး ဆောင်ရွက်နေသူတွေဘက်ကရော ဘယ်လို တုန့်ပြန်မလဲ။ သူတို့လည်း သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ လုပ်ကောင်း လုပ်လာနိုင်တယ်လို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂါဂြိုလ်ပေါ်က ကမ္ဘာဂြိုလ်ကို မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်း ဓာတ်ပုံ- နာဆာ
တကယ်တော့ ဂြိုလ်နီကြီးလို့ ခေါ်ကြတဲ့ အင်္ဂါဂြိုလ်နဲ့ ကမ္ဘာဂြိုလ်ဟာ မိုင်ပေါင်း ၃၄ သန်း ကျော် ကွာဝေးပါ တယ်။
NASA က ဂြိုလ်နီကြီးပေါ် ကမ္ဘာကနေ လွှတ်တင်ထားတဲ့ Cruiosity Rover ဆိုတဲ့ မစပ်စု အမည်ရ ဂြိုလ်ပေါ်သွား သုတေ သန ယာဉ်ငယ်က လွန်ခဲ့တဲ့ တပတ်က ရိုက်ကူးထားတာကို မနေ့ညကပဲ ဒီဓာတ်ပုံကို တွတ်တာ လူမှု ကွန်ရက်နဲ့ ဖြန့်ချိခဲ့ တာ လို့ The Mirror သတင်း တပုဒ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အင်္ဂါဂြိုလ်က ပေးပို့လာတဲ့ ဓာတ်ပုံမှာ ကမ္ဘာရဲ့ အောက်မှာ လ ကို လင်းလက်တဲ့ ကြယ်တွေအဖြစ်နဲ့ မြင်ရ ပါတယ်။
လာမယ့် ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ရက်နေ့ကနေ ၁၂ ရက်နေ့အထိ မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက် လည်ပတ်မယ့် ဂျာမနီသမ္မတ မစ္စတာ ဂျိုးအာချင် ဂတ်ခ်ျ (Mr. Joachim Gauck) ခရီးစဉ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံက ဂျာမနီကို ပေးဖို့ရှိတဲ့ အကြွေးတွေရဲ့ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကို လျော်ပေးမယ့် သဘောတူ လက်မှတ်စာချုပ်တခု ရေးထိုးမယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျာမနီသံရုံးက ဖေဖော်ဝါရီ ၆ ရက်နေ့မှာ သတင်း ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ဂျာမနီသမ္မတရဲ့ ခရီးစဉ်အတွင်း ပါလီမန်အမတ်တွေနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဦးဆောင်နေသူတွေ ပါမယ်လို့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ခရီးစဉ်အတွင်း ဂျာမနီသမ္မတဟာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ တွေ့ဆုံမယ့်အပြင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း၊ အန်အယ်လ်ဒီပါတီရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အမတ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအ၀င် လွှတ်တော် ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ လည်း တွေ့ဆုံမယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဂျာမန်ကနေ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အကြွေး ဘယ်လောက်တင်နေလဲ ဆိုတာကိုတော့ ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါဘူး။
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်းတောမြို့ ဒုချီးရားတန်း ကျေးရွာကိစ္စ စုံစမ်းရေး ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါပြီ။ အပြည့် အစုံကိုတော့ ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီး ဌာန ၀က်ဆိုက်ပေါ်မှာ အခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။
အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ်၊ ၁၆/၂၀၁၄
၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၇ ရက် (၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ ရက်) စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
၁။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်၊ ဒုချီးရားတန်းကျေးရွာနှင့်ဒုချီးရား တန်း(အနောက်)ကျေးရွာတို့တွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၃ရက်နေ့ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ကိစ္စရပ်နှင့် ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ကိစ္စရပ်တို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်အမှန်ပေါ်ပေါက်ရေး စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် အောက်ဖော်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်သော “စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်” ကို ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်လိုက်သည်-
(က) ဒေါက်တာသာလှရွှေ ဥက္ကဋ္ဌ ဥက္ကဋ္ဌ မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်း
(ခ) ဦးထွန်းအောင်ချိန် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် (ဂ) ဒေါက်တာငွန်ကျုံးလျန် အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတကာဥပဒေပညာရှင်
(ဃ) ဒေါက်တာတင်သိန်းလွင် အဖွဲ့ဝင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့
(င) ဦးတင်ဦး အဖွဲ့ဝင် အငြိမ်းစားသံအမတ်ကြီး
(စ) ဟာဂျီဦးတင်မောင်ဝင်း အဖွဲ့ဝင် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ညီညွတ်ရေး အဖွဲ့
(ဆ) ဦးဝင်းတည် အဖွဲ့ဝင် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့
(ဇ) ဦးသာပွင့်(ရပ်မိရပ်ဖ) အဖွဲ့ဝင် စစ်တွေမြို့၊ ရခိုင်ပြည်နယ်
(ဈ) ဦးလှသိန်း(ခ)မော်ဂျီဟူလာ(ရပ်မိရပ်ဖ) အဖွဲ့ဝင် မောင်တောမြို့၊ ရခိုင်ပြည်နယ် (ည) ဒေါက်တာကျော်ရင်လှိုင် အတွင်းရေးမှူး Myanmar Egress
၂။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်သည် အောက်ဖော်ပြပါ ကိစ္စရပ်များအပေါ် ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ် အမှန် ပေါ်
ပေါက် ရန် စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး သုံးသပ်ချက်နှင့်တကွ အကြံပြုတင်ပြရမည်-
(က) ၁၃-၁-၂၀၁၄ ရက်တွင် ဒုချီးရားတန်းကျေးရွာ၌ ခရေမြိုင် ရဲကင်းမှ ရဲတပ်ကြပ်ကြီး အောင်ကျော်သိန်း
သေဆုံးရသည့် ဖြစ်စဉ်နှင့် စပ်လျဉ်း ၍ ဖြစ်ပွားရသည့် အကြောင်းရင်းနှင့် ဓမ္မတာအတိုင်း သေဆုံးခြင်း ဟုတ်-မဟုတ်။
(ခ) ၂၈-၁-၂၀၁၄ ရက်တွင် ဒုချီးရားတန်း(အနောက်)ကျေးရွာ မီး လောင်မှုဖြစ်ပွားရသည့် အကြောင်းရင်း
နှင့် မည်သူ့ ပယောဂကြောင့် မီးလောင်ကျွမ်းခြင်း ဖြစ်ကြောင်း။
(ဂ) ဒုချီးရားတန်း(အနောက်) ကျေးရွာ မီးလောင်သည့်ဖြစ်စဉ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အခြေအမြစ်မရှိသော မမှန်ကန် သည့် သတင်းထုတ် လွှင့်မှုနှင့် မည်သူတို့က ဆောင်ရွက်ကြောင်း။
(ဃ) ဖြစ်စဉ်များကြောင့် သေဆုံး၊ ဒဏ်ရာရရှိမှု၊ နေအိမ်ဥစ္စာ ပစ္စည်းများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု အခြေအနေ။
(င) ထပ်မံမဖြစ်ပွားစေရန် ကြိုတင်ကာကွယ် ဆောင်ရွက်သင့်သည့် အကြံပြုချက်များ။
၃။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ် လုံခြုံရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက် များကို နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့တို့က စီမံဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
၄။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်သည် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံး ဥပဒေ၊ သက်သေခံ ဥပဒေတို့နှင့် အညီ စုံစမ်းစစ်ဆေး နိုင်သည့်အပြင် သက်သေများဆင့်ခေါ်ခြင်း၊ စာရွက်စာတမ်းများ တောင်းခေါ် ခြင်းနှင့် လိုအပ်သည့် နေရာများသို့ သွားရောက်စစ်ဆေးခြင်းတို့ကို
စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု အစီရင်ခံစာကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့အရောက် နိုင်ငံတော်သမ္မတထံသို့ တိုက်ရိုက်အစီရင်ခံ တင်ပြရမည်။
Written by ဦးတင်ဦး( ကျူရှင်)
ဇန်န၀ါရီ ၂၁ ရက်ထုတ် မဇ္ဈိမသတင်းစာတွင် ကျွန်တော်ရေးသားခဲ့သော “ပြည်သူတွေကို လျှော့မတွက် ပါနဲ့” ဟူသော ဆောင်းပါးတွင် ကျွန်တော်တို့ရွာက နမက္ကာရ ဦးချိုအကြောင်းပုံပြင်ကို ကျွန်တော် ပြောပြ ခဲ့ပါသည်။
ယခုလည်း ကျွန်တော် ပုံပြင်တစ်ပုဒ် ပြောပြလိုပါသေးသည်။ ကျွန်တော်ကသာ “ပုံပြင်” ဟူ၍ ခေါ်ဝေါ်သုံး စွဲနေရသော်လည်း တကယ်တော့ ရုတ်တရက် နားထောင်လိုက်လျှင် မယုံချင်စရာမျိုး ဖြစ်နေ၍သာ ထိုသို့ သုံးရခြင်း ဖြစ်ပါ၏။ ဖြစ်ရပ်ကတော့ ဒဏ္ဍာရီ မဟုတ်ပါ။ တကယ့်ဖြစ်ရပ်ပါ။
ယခုပြောမည့် ပုံပြင်ကလည်း ဒဏ္ဍာရီ မဟုတ်။ တကယ့်ဖြစ်ရပ်ပါ။ ကျွန်တော် ပျဉ်းမနား သကြားစက်တွင် အလုပ်လုပ်နေစဉ် ၁၉၆၀ ပြည့်လွန် အစောပိုင်း နှစ်များအတွင်းကဖြစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။
ထိုစဉ်က သကြားစက်များမှာ စက်မှုလက်မှု တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ရေး ကော်ပိုရေးရှင်း (စ၊ တ၊ လ၊က) ၏ လက် အောက်တွင်ဖြစ်၍ ထိုနှစ်များအတွင်းက တစ်နှစ်တွင် စ၊ တ၊ လ၊ က ရုံးချုပ်ကစက်ရုံ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ (Set- up) ကို အသစ်ရေးဆွဲတင်ရမည်ဟု ပျဉ်းမနားသကြားစက်သို့ ညွှန်ကြားစာ ပို့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် စက်ရုံ မှူး (ထိုစဉ်ကတော့ မန်နေဂျာဟု ခေါ်သည်) ကဌာနကြီးမှူးများကို မိမိတို့ဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံကို ရေးဆွဲတင် ပြရန် ဆက်လက်ညွှန်ကြားပါသည်။
ပျဉ်းမနားသကြားစက်တွင် ထိုစဉ်က အုပ်ချုပ်ရေးဌာန၊ ငွေစာရင်းဌာန၊ ကြံဝယ်ဌာန၊ ပစ္စည်းထိန်းဌာန၊ အလုပ်သမားဌာန၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန၊ သကြားထုတ်လုပ်ရေး ဌာနဟူ၍ ဌာနအသီးသီးရှိပေရာ ထိုဌာန တွေ၏ ဌာနကြီးမှူးများက မိမိတို့ဌာန၏ ဖြစ်သင့်သော အဆိုပြု ဖွဲ့စည်းပုံမူကြမ်းကို အုပ်ချုပ်ရေးဌာနသို့ ပို့ပေးရပါသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးဌာနက ဌာနအသီးသီး၏ ဖွဲ့စည်းပုံ မူကြမ်းများကိုစိစစ်၍ စက်ရုံမှူးထံ တင်ပြ ကာ သကြားစက်တစ်ခုလုံး၏ ဖွဲ့စည်းပုံကို ရေးဆွဲ၍ စ-တ-လ-က ရုံးချုပ်သို့ တင်ပြပေးရမည် ဖြစ်ပါ၏။
ထိုစဉ်က ကျွန်တော်သည် အင်ဂျင်နီယာဌာနနှင့် အလုပ်သမားဌာနတို့၏ ၀န်ထမ်းရေးရာကိစ္စများကို ကိုင် တွယ်ဆောင်ရွက်ရသည့် စာရေးဖြစ်၍ ထိုဌာနကြီးမှူးကြီးများ ရေးဆွဲတင်ပြလာသော ဖွဲ့စည်းပုံများကို လက်ခံ၍ စိစစ် တင်ပြပေးရပါသည်။
ကျွန်တော်ကိုင်သည့် နှစ်ဌာနအနက် အလုပ်သမားဌာန၏ လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံ အင်အားမှာ အလုပ်သမား အရာရှိတစ်ဦး၊ အထက်တန်းစာရေးတစ်ဦး၊ အမြဲတမ်း အောက်တန်းစာရေးတစ်ဦးနှင့် ရုံးအကူတစ်ဦးတို့ ဖြစ်ပါသည်။
အစိုးရဌာနများ၏ ဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲရာ ၌ မည့်သည့်ဌာနတွင် မည်သည့်ရာထူးက အရေအတွက် ဘယ်မျှ၊ လစာနှုန်း ဘယ်လောက်၊ ရာထူးအလိုက် လိုအပ်သည့် အရည်အချင်းနှင့် တာဝန်များကဘာ စသည်ကို လည်း ဖော်ပြရမြဲ ဖြစ်ပါသည်။
ဤတွင် အလုပ်သမားအရာရှိ လက်အောက်၌လုပ်နေသူ လက်ရှိ အထက်တန်း စာရေးကြီး သူ့အမည်ကို ဦးပြင်အောင်ဟု မှတ်လိုက်ပါစို့။) က ထိုဌာနအတွက် ဖွဲ့စည်းပုံကို ရေးဆွဲပေးပြီး အလုပ်သမားအရာရှိက လက်မှတ်ထိုး၍ အုပ်ချုပ်ရေးဌာနကို ပို့ပေးသည်ကို ကျွန်တော်က စိစစ်တင်ပြရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဦးပြင်အောင်သည် သူ့ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်တွင် လက်ရှိ ရှိပြီးရာထူးများအပြင် ဌာနခွဲစာရေးကြီး ရာထူးတစ်နေ ရာကိုလည်း တိုးဖြည့်ရေးဆွဲထားကာ ထိုရာထူးများအတွက် လိုအပ်သော ပညာအရည်အချင်းများကို လည်း သတ်မှတ်ပေးထားပါသည်။
အောက်တန်းစာရေးအတွက် လိုအပ်သော ပညာအရည်အချင်းမှာ တက္ကသိုလ် ၀င်တန်းအောင် သို့မဟုတ် အနည်းဆုံး အထက်ကျောင်းထွက်လက်မှတ် (S.L.C) ဖြစ်စေ၊ ဟိုက်စကူးဖိုင်နယ် စာမေးပွဲအောင်လက် မှတ် (H.S.F) ဖြစ်စေရသူ ဖြစ်ရပါမည်။
အထက်တန်း စာရေးအတွက် ဥပစာ (သိပ္ပံ) သို့မဟုတ် ဥပစာ(၀ိဇ္ဇာ) (ယခုခေတ် လိုဆိုလျှင် ၀ိဇ္ဇာ ၊ သိပ္ပံ ဒုတိယနှစ်အောင်) သို့မဟုတ် အနည်းဆုံး တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်သူ ဖြစ်ရပါမည်။ ရာထူးသစ်ဌာနခွဲ စာရေးကြီး ရာထူးအတွက် လိုအပ်သော အရည်အချင်းမှာမူ အထက်တန်း စာရေးရာထူးတွင် လုပ်သက် အနည်းဆုံး ငါးနှစ်ရှိသူဖြစ်ပြီး ပညာ အရည်အချင်းက အင်္ဂလိပ်မြန်မာ ခုနစ်တန်း အောင်သူ ဖြစ်ရပါမည်။
စာဖတ်သူများက “ဘယ်လိုကြီးလဲဟ အောက်တန်းစာရေးရာထူးတောင် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်ဖို့ လိုအပ်ပြီး သူ့ထက် နှစ်ဆင့်မြင့်ရာထူးဖြစ်သည့် ဌာနခွဲစာရေးကြီး ရာထူးကျတော့ အထက်တန်းစာရေး လုပ်သက် ငါးနှစ်နှင့် ခုနစ်တန်းအောင်သာ ဖြစ်နေပါကလားဟု တွေးမိချင် တွေးမိကြလိမ့်မည်။
အံ့သြမိကြလိမ့်မည်။ မအံ့သြကြပါ နှင့်။ ထိုဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲသူ ဦးပြင်အောင်က အထက်တန်း စာရေးလုပ် သက် ငါးနှစ်ရှိနေသူဖြစ်ပြီး ခုနစ်တန်းသာအောင်သူ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သူ့၏ဖွဲ့စည်းပုံသစ်မှာ ဌာန ခွဲစာရေးကြီး ရာထူးတစ်နေရာကို ထို အရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်နှင့် ရေးဆွဲခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်က ဦးပြင်အောင် ရေးဆွဲသည့်ဖွဲ့စည်းပုံကို အလွန်သဘောကျသဖြင့် ရုံးအုပ်ဖြစ်သူအား “ဆရာ၊ ဦးပြင်အောင်ရဲ့ ဌာနခွဲစာရေးကြီးရာထူးအတွက် သတ်မှတ်ချက် အရည်အချင်းထဲမှာ တစ်ချက်ဖြည့်လိုက် ချင်တယ်” ဟုပြောရာ “မင်းက ဘယ်လိုဖြည့်ချင်လို့တုန်း” ဟု ကျွန်တော့်ဆရာ ရုံးအုပ်ကြီးက မေးပါသည်။
“ဌာနခွဲစာရေးကြီး ရာထူးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့်သူသည် ဦးပြင်အောင် ဖြစ်ရမည်လို့ ဖြည့်ချင်တာ ပါ” ဟု ဖြေလိုက်သောအခါ “မင်းကလည်းကွာ ဒီကောင် ပြင်အောင်က ခုနစ်တန်းလောက်သာ အောင် ပေမယ့် ပညာရှိကွ” ဟု ပြန်ပြောပါသည်။
ယနေ့အခါ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကိစ္စကို အုန်းအုန်းကျွက်ကျွက် ပြောဆိုနေကြသံများကို ကြားရသည့်အခါ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် စာရေးကြီး ဦးပြင်အောင်ကို သတိရမိစရာ ဖြစ်ပါသည်။ ဦးပြင်အောင် သည် ညောင်နှစ်ပင် မပေါ်ခင် ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်သော်လည်း ညောင်နှစ်ပင်၌ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေရေးဆွဲကြသည့်အခါ ဦးပြင်အောင်၏ ပညာမျိုးတွေ အများကြီးရှိသူများ ပေါ်ထွက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုရပေ မည်။
ဦးပြင်အောင်က ဌာနခွဲစာရေးကြီး ရာထူးကို ငါပဲယူမည်ဟု သူ့ဖွဲ့စည်းပုံထဲတွင် ထည့်မရေးထားသော် လည်း အထက်တန်းစာရေး လုပ်သက်ငါးနှစ်ရှိရမည်နှင့် ခုနစ်တန်းအောင်ရမည်ဆိုတာများနှင့် ချုပ်ထား လိုက်သည်။ ထိုရာထူးကိုလုပ်လို၍ ဘီအေအောင်သူက လာလျှောက်တောင်မှ အထက်တန်း စာရေး လုပ်သက် ငါးနှစ်မရှိတာနှင့် ဌာနခွဲစာရေးကြီး ဖြစ်ခွင့်ရမည် မဟုတ်ပေ။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ ရေးဆွဲသူများသည်လည်း ဦးပြင်အောင်ကဲ့သို့ပင် ပညာရှိကြပါပေသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် နာမည်ကိုကား ပုဒ်၅၉ (စ) တွင် ရေးမထားခဲ့ကြပါ ပေ။ ပုဒ်မ ၅၉(ဃ) ကိုလည်း စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများမှအပ သာမန်ပြည်သူများ သမ္မတဖြစ်ခွင့်မရှိစေရဟု ရေးမထားခဲ့ကြပါပေ။
(၃-၂-၂၀၁၄) နေ့ထုတ် ဤသတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသော “ပုဒ်မ ၅၉(စ) ကို မပြင်သင့်ဟု ဟောပြော” ဟူသော သတင်းနှင့်ဆက်စပ်၍ တွေ့ဆုံမေးမြန်းသူများ၏ ဖြေကြားချက်များကို ဖတ်ရှုမိသည့်အခါ ထို လူပုဂ်္ဂိုလ်၊ ရဟန်းပုဂ်္ဂိုလ်များ၏ အလိုအရ နိုင်ငံ၏ အနာဂတ်အတွက် အမြော်အမြင် နှင့်ရေးဆွဲထားသော ပုဒ်မ ၅၉(စ) ကို ပြင်လိုသူများသည် မိုက်မဲရာကျမည့်သဘော ရှိနေသည်။
ကျွန်တော်သည် ထိုထိုပုဂ်္ဂိုလ်များ၏ အာဘော်ကို ဖမ်းကြည့်လိုက်သည့်အခါ ၁၉၄၇ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတုန်းက ယခု၂၀၀၈ ဥပဒေထဲက ပုဒ်မ ၅၉(စ) လို ကန့်သတ်ချက်တွေကို ထည့်မရေးခဲ့သော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် တော်တော် အမြော်အမြင် နည်းသူပေတကား။ ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဥပဒေတွင်လည်း ယခု ၅၉(စ) လိုမျိုးကို ထည့်ရေးမဆွဲခဲ့သည့် ဦးနေ၀င်းသည် တော်တော်ညံ့သော စစ်ခေါင်းဆောင်ကြီးပေ တ ကားဟု တွေးချင်ချင် ဖြစ်လာမိသည်။
ပုဂ်္ဂိုလ်ရေးကိုရည်ရွယ်ပြီး ဆွဲထားတာ မှန်းထင်ရှားနေသော ဥပဒေပုဒ်မကို ပြင်ရေး မပြင်ရေး ပြောကြရာတွင် “ဥပဒေမပြင်ရေးဆိုတာ ပုဂ်္ဂိုလ်ရေး မပါ,ပါဘူး” ဆိုသော နိုင်ငံရေးသမားများ ပေါ်ထွက်လာတာကို ကြည့်ရသောအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီသည် အားရစဖွယ် ရင့်ကျက်လာချေပြီ တကားဟုပင် တွေးစရာ ဖြစ်လာပါသည်။
ကျွန်တော် နားလည်သလောက် ပြောရလျှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် သူသမ္မတဖြစ်ရေး၊ မဖြစ်ရေး ဆိုတာထက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီ ပီပီပြင်ပြင် ပေါ်ထွက်ရေးအတွက် ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းများနှင့် မညီ သော အခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဖို့ ပြောနေခြင်း ဖြစ်သည်။ ပုဂ်္ဂိုလ်ရေးအမည်ဖြင့် တပ်ပြောရလျှင် ယနေ့ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး၏ မျက်နှစာတွင် ရှေ့တန်းရောက်နေကြသော ဦးသိန်းစိန်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သူရ ဦး ရွှေမန်းတို့သည် နောက်ထပ် အနှစ် ၃၀ အထိ မနေရတော့ဖို့ များသော အသက်အရွယ်တွေ ရောက်နေသူတွေချည်း ဖြစ်ပါသည်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ပင် ငယ်တော့သည့်အရွယ် မဟုတ်တော့ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထိုသူတွေ ရှိသေးသည် ဖြစ်စေ၊ မရှိတော့သည်ဖြစ်စေ၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေက ရှိနေ ရမည် ဖြစ်သည်။ အရှည်သဖြင့် တည်နေရမည့် အခြေခံဥပဒေက ဒီမိုကရေစီစံတွေနှင့် ဆန့်ကျင်ဖီလာ တွေ များနေသည်ဆိုလျှင် ဒီမိုကရေစီစကားကို ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် မပြောကြသေးတာက ပို ကောင်းပါလိမ့်ဦးမည်။
တကယ်တော့ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်စသော လက်ရှိခေါင်းဆောင်များက ဒီမိုကရေစီ စံနှင့်မညီသော အခြေခံဥပဒေကိုပဲ ဆက်လက်ရှိနေသေးချင်သည့်သဘောက ဤသို့ ဤသို့သော အကြောင်းတွေကြောင့်ပါဟု ရိုးရိုးသားသား ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောမည် ဆိုလျှင်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အဆိုပြုထား သော လေးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲကို လက်ခံပြီး ရှင်းပြဆွေးနွေးပြနိုင်ဖွယ် ရှိပါသည်။
ကျွန်တော် ခန့်မှန်းကြည့်မိသလောက် ပြောရသော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်လည်း မြန်မာ့နိုင်ငံရေး တွင် လောလောဆယ်၌ တပ်မတော်၏အခန်းကဏ္ဍက ရှိသင့်သလောက် ရှိနေရဦးမှာဖြစ်မည်ဟု အမှန် အတိုင်း တွေးထားမိလောက်ဖွယ် ရှိပါသည်။ အရေးကြီးတာက ရိုးသားပွင့်လင်းပြီးနိုင်ငံကို တစ်ကယ်ချစ် ကြဖို့ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေကြီး ဦးပြင်အောင် ရေးဆွဲခဲ့သည့် ဖွဲ့စည်းပုံ(set up)နှင့် ပမာတူ သော ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ (constitution) ကို ဘဒ္ဒကမ္ဘာချဉ်းအောင် ကာကွယ် စောင့်ရှောက်သွားမည် ဟူသော အယူအဆမျိုးကို အတင်း ဆုပ်ကိုင်မထားကြပါနှင့်ဟု လက်ရှိဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံ ဥပဒေ အပေါ် (မင်းမှာသစ္စာ လူမှာကတိဆိုပြီး အထပ်ထပ်) သစ္စာဆိုထားသော အမတ်မင်းများကိုလည်း မေတ္တာ ရပ်ခံလိုပါသည်။
မာလကာသီး ပုံမှန်စားသုံးသူများကို လေ့လာခဲ့ရာ နှလုံးရောဂါ ဖြစ်ပွားမှု နည်းပြီး သွေးနှင့် ပတ်သက်သော ရောဂါများလည်း အဖြစ်နည်းကြောင်း ၎င်းတို့မှ ဆက်လက် ပြောကြား ခဲ့သည်။
သတင်းထောက် အဖွဲ့တဖွဲ့ဟာ သက်စွန့်စံဖျားခရီးတခုအဖြစ် အမဇုံ တောနက်တွင်းက ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေ ကို ပြုစုခဲ့ကြပါတယ်။ မနှစ်က မေလက စပြီး အပိုင်းလိုက် ထုတ်လွှင့်တင်ပြနေခဲ့တာပါ။
သတင်းမှတ်တမ်းပြုစုသူတွေဟာ ဇူးလူမျိုးစုတွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး လူမျိုးစု ခေါင်းဆောင်ရဲ့ ခွင့်ပြုမှုနဲ့ အဲဒီ ဇူး လူမျိုးစု ရွာမှာ သူတို့ လူမျိုးစုတွေဘယ်လို စိုက်ပျိုးစားသောက် နေထိုင် အသက် ရှင်ကြတယ်။ ဘယ်လို အမဲလိုက်ကြတယ်ဆိုတာတွေကို မှတ်တမ်းပြုစုခွင့်ရခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမှတ်တမ်းရဲ့ အမည်ကို Tears of the Amazon လို့ အမည်ပေးထားပြီး အခန်းဆက် တင်ပြထားပါတယ်။
ရခိုင်ခေါင်းဆောင် ၂ ဦး မလေးရှားမှာ သေနတ်ပစ်ခတ်ခံရမှုက လွတ်မြောက်
မလေးရှားနိုင်ငံကို ခေတ္တအလည်အပတ် ရောက်နေတဲ့ ဒေါက်တာအေးမောင်နဲ့ ဦးအေးသာအောင်တို့ ကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက ကွာလာလမ်ပူမြို့က ကုန်တိုက်တခုက အထွက်မှာ အမည် မသိ သေနတ်သမား တချို့ရဲ့ သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်မှုတခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
ဆိုင်ကယ်စီး သေနတ်သမားနဲ့ ကားတစီးပေါ်က သေနတ်သမား တို့ဟာ ကုန်တိုက်တခုက ထွက်လာတဲ့ အဆိုပါ ရခိုင် ခေါင်းဆောင် ၂ ဦးကို သေနတ်နဲ့ ၈ ချက် ပစ်ခတ်ပြီး ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့ Coral Arakan News သတင်း တပုဒ်မှာ ဖော်ပြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ရခိုင်ခေါင်းဆောင်တွေဟာ ဘာမှ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရခဲ့ခြင်းလည်း မရှိခဲ့ဘူးပဲ မလေးရှားနိုင်ငံ
မြန်မာ သံရုံးမှာ လုံခြုံစွာ ရှိနေပြီလို့ သတင်းရပါတယ်။
သေနတ်သမားတွေဟာ ဘယ်သူတွေ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ မသိရပေမယ့် မြန်မာစကားနဲ့ “ ပြေး” လို့ အော်ဟစ် ထွက်ပြေးသွားကြတာဖြစ်တယ်လို့ အဆိုပါ သတင်းက ဖော်ပြထားပါတယ်။
မလေးရှားရောက် ရခိုင်များရဲ့ ဖိတ်ခေါ်မှုနဲ့ ဒေါက်တာ အေးမောင်နဲ့ ဦးအေးသာအောင် တို့ဟာ မလေးရှား ကို သွားရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်နေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ စုံစမ်း သိရှိရပါတယ်။
မလေးရှားက လာတဲ့ သတင်းတွေအရ ရခိုင် ခေါင်းဆောင် ၂ ဦးလုံးဟာ လုံခြုံတဲ့ နေရာမှာ ရောက်နေပြီ
ဖြစ်တယ်လို့ မလေးရှားက ရခိုင်သတင်းရပ်ကွက်တွေက ပြောပါတယ်။
အခု တိုက်ခိုက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ရခိုင် ခေါင်းဆောင် ၂ ဦး စီးနင်းလိုက်ပါလာတဲ့ ကားမှာတော့ သေနတ် ကျည်ဆံတွေ ထိမှန်သွားခဲ့လို့ အနည်း ငယ်ပျက်စီးမှု ရှိတယ်လို့ ရခိုင်သတင်းရပ်ကွက်က ပြောကြပါတယ်။